トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Twin Seoul Stage Danho rechitatu se "dambudziko" ndizvo
vafemberi zvechokwadi [3500 Yen Free yokunyatsoongorora] kuti nzira
mapatya Seoul musangano, mweya vachange achisiya pamusoro nzendo nomwe sezvo yokupedzisira kugadziridzwa kuti vave mumwe. It kunokosha kunotyisa kusangana rokutanga danho, asi vachaora chisinga- yomudzimu, uye anova yechipiri Danho rwakabatwa ruzivo uye ruzivo vakawana pazuva nezuva iro rave kupedzerwa mumwe, mudzivisi kubudikidza chimiro yaunganidzwa imprinting kana ndinofunga kunetseka kana kupokana.
uye inotevera Danho ndiye Danho rechitatu. Panguva iyi, izvozvo achirasa aonekwe kuti yambokurukurwa kusvikira ikozvino, kana unogona kuita kusiya mweya vade mumwe ndiyo kiyi. Zvisinei, avo vave vakamushatirisa ne kare rudo ruzivo, kusiya kurimwa chimiro kubva chiitiko ndechokuti kuzotyisa, pachava kunyange kuoma.
Naizvozvo, ichava kukuvadzwa haana kuraswa zvachose kuzvikudza pachake kune mumwe. Izvi zvakare bvunzo kuti yave zvavakatemerwa kuti mweya kuva mumwe uye mumudzimu akamuka zvachose, chaizvoizvo mapatya Seoul anofanira kukurira iyi ndiyo hatigoni kuva mumwe.
Panguva iyi pamwe kurwadziwa guru, asi sei kana kuenda kurwisa kuzvikudza pachake pfungwa. Anosungwa pfungwa rudo
rechitatu padanho kudhumhana anoremedzwa rudo
? apfuura zvimiso kuti kunoitika pamwe mapatya mweya, nokuda kare kuda ruzivo yavo, iyo ruzivo rechipiri Danho kufunganya uye, pashure nokutambura mubvunzo mumwe bato, achaita kuramba mumwe bato haagoni kukunda kutambura. Saka kure rudo hakusi rudo mapatya mweya, ndiko vaya pamusoro zvenyama zvimwe zvinhu kune mumwe, asi kutungamirira kuti vaizoramba mumwe bato nokusaparadza kupembedza mamiriro.
Zvisinei, panzvimbo yapfuura zvimiso rudo ari pachikuva rechitatu, izvozvo matanho chiziviso kuda shamwari mirawo. Naizvozvo, noruzivo sei kare, pfungwa rudo ndokunge kuraswa Kana Terra kunokosha.
kare rudo ruzivo
? kufunganya uye zvakare wakakwidzwa mubvunzo dhumhana nevamwe bato, hazvina kuva nyore kuraswa. Kufunganya uye mubvunzo kunobva pfungwa iyi, muna dariro rechitatu ichava akakura uye makuru. Zvadaro, asisiri kuramba kutsiga Manzwiro, zvazvichaitawo mudiwa uye nguva zhinji dhumhana.
pasinei ndizvo chinorwadza ezvinhu, vachiri vanhu vaviri vade mumwe zvakasimba acharamba tryst. Nemamwe mashoko, kuti kusangana uku akabata kutambura kukuru rinobva kufunganya uye mubvunzo haina kutiza kutambura.
mapatya mweya kuburikidza Danho iri
chikuva wechitatu kuparadzana kwechikuva, achaiswa zvavakatemwa kutambudzika kukuru. Kana kwete ushe kubva kuzvikudza pachake kuti kusvikira ikozvino, zvicharehwawo kukudziridzwa ikoko aipikisana mapatya mweya muhondo huru. The chinotevera Danho ichi, kuparadzana kwechikuva kumirira.
Zvisinei, vashanduri kunatsiridza mumwe pashure kuparadzana, kana uchiziva kuti pane unodiwawo kurasa kuzvikudza pachake, zvatinokwanisa pakunopera kwechikuva. Sei kukunda iyi yaizova inokosha.
Pauriri, chichagamuchirwa zvavakatemerwa kutambudzika kukuru. Kana kwete ushe kubva kuzvikudza pachake kuti kusvikira ikozvino, zvicharehwawo kukudziridzwa ikoko aipikisana mapatya mweya muhondo huru. The chinotevera Danho ichi, kuparadzana kwechikuva kumirira.